Nchịkọta Ahịa Ahịa 101: Gosi M Ego ahụ! | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 30, 2008 Tuesday, February 16, 2016 Douglas Karr
Mgbe m dere edemede maka Talent Zoo n’ọnwa gara aga, edere m banyere ya leverage akpaaka na mwekota iji bulie ma leverage nke usoro ịntanetị gị, yana ụlọ ọrụ na-enyere ndị azụmaahịa aka igbu ndị ahụ ahia akpaaka ohere.
A nkeji ole na ole gara aga, e zigara m email site n'aka Andrew Janis nke Ndụmọdụ bara Uru na Whitepaper ọhụrụ ha wepụtara na nsonaazụ ya bụ ihe ịtụnanya. (Offọdụ n'ime nkọwa okwu ndị a dị n'okpuru bụ Andrew dere na email ahụ ọ zitere… Agaghị m enwe ike ịkọ ya!)
Ọnọdụ nke nchịkọta ahịa
Akwụkwọ akụkọ White a na-achikọta nsonaazụ nke nyocha Evantage Consulting mere iji kpughee mmetụta nke nchịkọta na ndi otu ahia na ndi otu.
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọ na ka ụlọ ọrụ na-etinyekwu oge na ihe onwunwe nchịkọta, ọtụtụ ka na-eche ihe ịma aka nke ịtụgharị data n'ime ihe. Agbanyeghị na e mere nnyocha ahụ na Twin Cities, ekwenyere m na nsonaazụ ya ga-agbanwe oge niile na ụlọ ọrụ ahụ.
Otutu ndi ahia bu itinyekwu ego na nchịkọta na akụrụngwa, ma ịgbanwee ahịa nke data na-agbanyebeghị ka ọ bụ eziokwu na ọtụtụ nzukọ.
Dollar dollar amalitela ịgbanwe ihe omuma ndi ozo.
E nwere otu ndị na-eme ihe nkiri kachasị elu ahia na-achuta data n'obi.
Njikwa bụ isi na-eme mgbanwe na ahịa na-ebu data, ma ọ na-adị nwayọ ịbanye.
Na mpempe, ọ bụ ihe nchekwube nke ahịa… ụlọ ọrụ na-amalite n'ezie leverage technology, tụọ nsonaazụ, na ịgbanwe ya. Ha na-amalite weta ya! Mass ahịa nwụrụ anwụ, ịrị elu nke ahịa ezubere iche na weebụ na-emecha nweta ume.
Gosi m ego ahụ!
Direct na nchekwa data nchekwa ahịa a na iti mkpu a ruo ọtụtụ afọ… ọ na-echetara m nke Cuba Gooding na Jerry McGuire -eme ya mkpu, “Gosi m ego ahụ!”. Onye isi ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịkatọ otu ihe ahụ na ngalaba ahịa ha.
Nke a bụ ozi ọma maka ndị na-azụ ahịa yana ndị na-ere ahịa. Mgbe ndị ahịa gụrụ mgbasa ozi agbadoro ma baa ezigbo uru, ha na-aza. Mgbe ndị ahịa na-eme ihe ziri ezi, ha na-achọpụta na mbọ ahụ na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị naghị edozi akakabarede ihe mgbaru ọsọ, nyochaa nsonaazụ na ime mgbanwe, ị na-atụba ụta n'ọchịchịrị.
Nwere ike ibudata Whitepaper na Ahịa Analytics si Uru. Site na ụlọ ọrụ weebụ saịtị: Ebe ọ bụ na 1999, Ndụmọdụ bara Uru enyerela aka na e-azụmaahịa na-aga nke ọma site na itinye azụmaahịa, arụmọrụ yana akụrụngwa IT? maka arụmọrụ kachasị na arụmọrụ.
Tags: agba nke egomwepuịkpọtụrụ ize ndụgosi m ego-acha ọcha akwụkwọAkwụkwọ edemede
Ọkt 1, 2008 na 6:29 PM
Ekwenyere m na ihe niile na-adịwanye mkpa. Ka m na-amalite azụmaahịa m na ileba anya na nhọrọ mgbasa ozi achọtara m onwe m na-enyocha data mgbe niile. Kedu mgbasa ozi na-enweta pịa nke ndị ọ bụghị. Mgbe ahụ ịnwa ịchọpụta ihe kpatara ya na dochie ndị na-adịghị pịa na ndị m chere na a ga-apịrị.
Ihe niile dabere na onye ahịa gị bụ ihe ha chọrọ ịhụ. Ndị mmadụ n'ozuzu kpọrọ asị mgbasa ozi mana m na-eche na naanị n'ihi na ha anọwo na-bombarded na un-ezubere iche na mgbasa ozi ruo ogologo oge. Ọ bụrụ n ’idowe ihe dị n’ihu ha na ha nwere ike ịchọta uru ha ga-ahụ mgbasa ozi gị dị ka ịgbakwunye ọdịnaya dị na saịtị gị.